Nhau - Zvinodikanwa zvekushandisa zvakachengeteka uye chengetedzo yeaminoguanidine hydrochloride
3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-katatu
Zvinodikanwa zvekushandisa zvakachengeteka uye chengetedzo yeaminoguanidine hydrochloride
Zvinodikanwa zvekushandisa zvakachengeteka
Teerera kuchengetedzwa kana uchishandisa aminoguanidine hydrochloride, nekuti ikemikari ine chepfu. Kana paine dambudziko rekuchengetedza, rinogona kutambura kurasikirwa kukuru. Izvi zvinotevera zvinodiwa kuti ushandise zvakachengeteka.
1. Tinofanira kuita basa rakanaka mukudzivirira. Vashandi vanofanirwa kupfeka zvekudzivirira kudzivirira kusangana kwakanangana nemakemikari ane chepfu.
2. Ita basa rakanaka mukudzivirira kwekuvuza. Kana kamwechete kuburitswa kukaitika, kunounza kutyisidzira kwekuchengetedza nharaunda nevashandi.
3. Mushure mekushandisa, bata magurovhosi akafumurwa kune aminoguanidine hydrochloride.
Muchidimbu, kushandiswa kweaminoguanidine hydrochloride kune zvakadzama zvinodiwa uye hakugone kuvhiyiwa zvisina boni. Kushanda kwakarurama kunogona kuvimbisa kuchengeteka. Kana iwe uine chero mibvunzo, bvunza nyanzvi yemakemikari inogadzira.
Sekemikari ine chepfu, aminoguanidine hydrochloride ine zvakatipoteredza zvinodiwa kuchengetedza. Kana isina kuchengetwa zvakanaka, zviri nyore kukanganisa mashandiro uye kunyange kukonzera tsaona dzekuchengetedza. Idzi mbiri dzinotevera dzinofanirwa kutariswa panguva yekuchengetedza.
1. Chengeta munzvimbo inotonhorera
Nekuti aminoguanidine hydrochloride inoora kana ichipisa, uye chiri chinhu chine chepfu, chinofanirwa kunge chakakanganisa nharaunda mushure mekuora. Saka inofanirwa kuiswa munzvimbo inotonhorera, kuti pasazove nekupisa volatilization.
2. Yakasimbiswa zvakasiyana
Aminoguanidine hydrochloride inofanira kurongedzwa uye kusimbiswa zvakasiyana. Haikwanise kuchengetwa nemamwe makemikari. Mushure mezvose, zvine chepfu. Izvo zvakare zvakafanira kuisa zviratidzo zvekuchengetedza chengetedzo munzvimbo dzinoonekera munzvimbo yekuchengetera. Iyi inzira inoshanda yekuona kuchengetedzeka.
Nzira dzekuchengetedza aminoguanidine hydrochloride dzinounzwa pano. Kana uchichengeta, iwe unofanirwa kuitarisisa, kuitira kuti uve nechokwadi chekuti mashandiro haana kukanganiswa.
Post nguva: Aug-08-2020
Weier Road, Gulang County Maindasitiri Yekusungwa Nzvimbo, Tuwei, Gansu Province